Voina an-dranomamy :: Mpianaka maty narendriky ny lakana • AoRaha
Voina an-dranomamy Mpianaka maty narendriky ny lakana
Rendrika ny lakana kely iray namakivaky ny farihin’Alaotra, afak’omaly alina. Tafalentika tao anaty rano ary namoy ny ainy tamin’izany ny mpianaka: vehivavy sy ny zanany lahy, roa taona. Avotra ny lehilahy roa sy ny zazavavy, dimy taona, izay fianakavian’izy ireo ihany. Tsy nisy nampandre momba ity voina an-dranomamy ity ny zandary misahana ny faritra nitrangan’ny loza. Omaly izy ireo vao nidina any an-toerana nanao ny fanadihadiana rehetra.
Tafita vao rendrika
Mampalahelo ny voina tampoka nihatra tamin’ireto fianakaviana any amin’ny distrikan’Ambatondrazaka ireto. Avy tao amin’ny kaominina Ambohidava niampita lakana ho any andrefana any amin’ny kaominina Anororo izy ireo. Olona dimy: mpivady sy ny zanak’izy ireo mianadahy ary lehilahy iray hafa ireto niara-dalana.
“Efa mahazatra an’ireo olona ireo ny mivezivezy amin’ny lakana avy amin’ireo toerana roa voalaza. Nitondra katsaka izy ireo, omaly tolakandro (Naotin’ny fanoratana: alarobia). Rendrika ny lakana nony efa ho tafita teny amin’ny sisin’ny rano”, araka ny fampitam-baovao avy any Ambohidava.
Teo amin’ny zato metatra tsy hahatongavana eny antanety no nisehoan’ny loza. Noho ny hamafin’ny fitsoky ny rivotra sy ny onja teny ambony rano no nampilentika ny lakana.
“Nihazakazaka niantso vonjy tany an-tanàna ireo olona telo avotra. Ireo mpianaka kosa, ilay renim-pianakaviana sy ny zanany lahy, nilentika tao anaty rano. Naharitra ora maro ny fikarohana nataon’ny fokonolona. Ny sasak’alina vao hita ny vatana mangatsiakan’izy ireo”, hoy ny zandary nanao ny famotorana tany Anororo.
Feon-dakolosin’ny fiangonana no nanairana ny mpiray tanàna, ny alina, nilazana ny vaovao mampalahelo tamin’ny fahitana ny razana.
Fikarohana tany Sambava – Tratra ilay vehivavy nitsoaka tao amin’ny fonjakely